Beledweyne oo lagu sameeyey maanta qori tuurka tartanka Dugsiyada magaaladaas – Gool FM
Muxuu ka yiri Klopp heshiis kordhinta Mohamed Salah ee kooxda Liverpool?
Beledweyne oo lagu sameeyey maanta qori tuurka tartanka Dugsiyada magaaladaas
Kaafi September 28, 2016
(Beledweyne) 28 sebt 2016. Waxaa Maanta Magaalada Beledweyne lagu qabtay Isku-aadka Tartanka Kubada Cagta ee Dugsiyada Hose-Dhaxe-iyo Sare ee ku yaala Magaalada Beledweyne ee Xaruunta Goballka Hiiraan.
Tartankan oo sanadkiiba mar loo qabto Ardayda wax ka barta Dugsiyada wax barashada ayaa waxaa soo qaban qaabiyay Ururka horumarinta Ardayda Goballka Hiiraan ee HISDA,iyadoo aay taakuleynayaan Ururka Dhalinyarada Goballka Hiiraan iyo waliba Xiriirka Kubada Cagta OLAMPICADA Goballka Hiiraan.
Waxaa loo dhigay Ardayda Koob lagu guunsiindoono cida Tartanka ku guuleysata Kaalinta labaad Akh-laakh wanag Gooldhilaha ugu sareeya ayaa iyane la bixin doonaa.
Gudomiyaha Ururka Horumarinta Ardayda Goballka Hiiraan C/naasir Faarax Cil oo goobta isku aadka lagu qabtay ka hadlay ayaa tibaaxay in tartankan qabashadiisa ay u soo mareen wado dheer sanadkii labaadne aay ku guuleysteen in aay qabtaan,muuhamadane aay tahay is dhax galka Arday wax ka barta Scolada Beledweyen ku yaala.
Gudoomiyaha Olampicada Goballka Hiiraan C/Kariin Xasan Cabdulle ayaa sheegay in tartankan aay sanadkan kasoo qeeb galeen 9 Dugsi oo ku yaala Beledweyne,tartankane uu bilaabanayo 02-10- 2016 oo ku began Maalinta Axada ah,waxuuna balan qaaday in tartankani markii uu dhamaado aay qaban doonaan mid kale oo aay kasoo qeeb galayaan dhamaan kooxaha ka dhisay Xaafaadaha Magaalada Beledweyne.
kooxdii laga adkaada kulan labaad ma dheeli doonto oo wey iskaga hari doontaa tartanka,sido kale waxa leesla gartay in Scolkii lagu arkaa Ciyaaryahan aan Scolka dhigan tartanka laga saari doono taasi oo lesku raacay ugu dambeyn.
Si kastba waxaa Koobta difaacanaya Scolka Beledweyne kaasi oo Sanadkii hore qaaday tartankan waxaana adag in la saadaaliyo cida Khaadi karta sanadkan Koobkan Scolada Hose Dhaxe iyo Sare ee ku Yaala Beledweyne.
A-Mujamac Vs Sh,Maxamed Macalin
B- Cumar Binu Khadaab Vs Beledweyne
C- Horseed Vs Adalti
E- Hiiraan Vs Alaqsa
Alhuda ayaa iyaa iyadu nasiib uyeelay in aaysan ciyaarin wareega
kowaad kadib markii Baqtiyaa nasiib aay ku heshay in wareega kan xiga
W/ D: Maxamed Ibraahim Ziyaad
SAWIRRO: Tababarkii ugu dambeeyey ee ay kooxda Man United isugu diyaarinayso kulanka Europa League
Shiinaha oo rajaynaya marti gelinta cayaaraha Koobka Adduunka 2030